Sida loo qaado, waayo, Trip A Tareen Guud Italy | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Sida loo qaado, waayo, Trip A Tareen Guud Italy
kalsoontahay, fiiri horyalka Talyaaniga oo aadan haysan boorsooyinka culus oo aad u badan. Halkan sida in ay alaabahooda safarka tareenka ee guud ahaan Italy a.
Sida loo qaato tareen – dharka, kabaha, iyo accessories
Goorma safarka by tareenada iyada oo Italy, aad rabto doonaa si ay u sii ciyaarta fashion aad u xoog badan. Laakiin halkii ay xirxiraan oo dhan ka dhisan aad ugu jeceshahay, dooran stylishly, Classics si fiican u gooyaa oo accessorize oo cad cad war geesi. Tusaale ahaan, santuuq safarka tareenka a jeenis ah oo madow iyo sidoo kale-rakibay, t-shirts iyo Luqunta Polo eegi dhimatay oo keliya. Waayo, maalin eegno aan sugnayn, Labada ciyaaryahan la kabuhu iyo jaakada denim a. Habeenkii, ku dar guryo rasmi ah iyo xoogaa yar oo dahabka hadal.
Hubi in ay alaabahooda safaleeti waaweyn. Iyo sidoo kale xiran la kulaalo, haddii ay qabow ama in aad ku darto, kartina in aad ka dhisan, safaleeti weyn noqon kara buste marka aad nasato on your tareen kortaan. xitaa waxa aad isticmaali kartaa sida bustaha geeduhu ama shukumaan xeebta cooshado.
Marka ay timaado in bacaha, keeno hal bac garabka weyn in qaban karto shopping ama xeebta daruuriya. Waxaad u baahan doontaa in boorsada ama cross-jirka boorso hawlaha maalin-ka-maalin dalxiiska iyo mid yar, xajin rasmi ah fiidkii, sidaa darteed waxa xaq marka aad xirato safarka tareenka.
Qalabka nadaafadda, waxyaabaha quruxda, iyo daawada
Waayo, safarka tareenka, waxaa qiimo iibsan safarka yimaa-in ay alaabahooda safar tareen oo dhan alaabta quruxda ama weel safarka dhigay waxaad buuxin kartaa waxyaabaha adiga kuu gaar ah. Haddii aad safar dheer yahay todobaad ama laba, tixgeli inaad iibsato shaambo dheeraad ah iyo gel Roob inta aad safarka, halkii ay ka keeni jireen weel buuxa xajmi-in boorsadaada – isagoo intaa ku daray culayska iyo kor u bannaan. Waxa kale oo aad codsan kartaa in shay-baarka aad counter quruxda degaanka. Waxay inta badan awoodi doonaan inay ku siiyaan versions yar ee daruuriga oo dhan, sida concept, serum iyo habeen cream.
Marka ay timaado in qurxiyo, xiirtaa oo aad caadiga ah hoos u ah safar. tire A muraayadaha madow, guduudayn in laab karaa sida eyeshadow iyo concept sawir-diyaar kugu dhawri doonaa. Waxaad kaloo soo wadan kartaa wax soo saarka multi-ujeeddo sida faasliin ama sideed saac cream, kaas oo noqon kara labeenta dibnaha, highlighter ama tire u daran.
Ha ilaawin daawada laguu qoray, iyo sidoo kale xirmada gargaarka degdegga yar. xanuunka dejiya, daawo lallabbo iyo band-qalabka ha soo qaato oo meel bannaan oo aad u badan, iyo haddii aad u baahan tahay wax ka badan oo gaar ah, aad u yeelan doontaa in ay ka heli at Talyaani ah farmashiyaha ama dukaanka daroogada.
Madadaalo, korantada, iyo waraaqaha
A safarka tareenka waa waqti fiican in la qabsado on reading, si kastaba ha ahaatee, buugaag waa weyn oo culus. shidin A, kiniin ama smartphone akhriska a app waa hab fiican si oolin ilaa on wax akhriska, halka weli ilaalinta Nuurkiinnee boorsooyinka si loo hubiyo in ay alaabahooda for tareen ku turaanturoon aad kaniini. Sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa buugaag oo wuxuu ku raaxaysan view ka soo daaqadda inta aad dhagaysanayso aad novel.
Oo ay la socdaan dukumentiyada safarka jirka aad loo baahdo, waxa kale oo aad qaadan kartaa sawiro ama iskaan waraaqaha muhiimka ah iyo nuqul email naftaada. Sidaas, haddii aad smartphone ama kiniin ah aan la heli karin, waxaad ka gali kartaa galay aad email fog oo aad marin u waraaqaha aad u baahan tahay.
Brussels si Tareenada Bonn
Antwerp in Tareenada Bonn
Halle in Tareenada Bonn
Ghent in Tareenada Bonn
Marka qaadashada ah safar tareen habeenkii, waxaad u baahan doontaa in la xasuusto in ay alaabahooda for tareen oo dhan daruuriga aad boorso yar ee boorsada ama bac cross-jirka. Waxaa ka mid ah musqusha aasaasiga ah sida cadayga iyo Jinka, hairbrush ama shanlo, wajiga ka tirtiri, iyo tire. Haddii aad tahay qarsoodiga fudud, laga yaabaa in aad rabto in aad ku dar dhego gashi iyo maaskaro hurdo aad bacda habeen.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa qaar ka mid ah dhar hurdo khafiifa, ama haddii aad doorbidayso, dhar raaxo leh aad seexan karaa, sida surwaal track ama gacamo iyo jaakad ama top taangiga la taageero qarsoon a. Ha illoobin in aad safaleeti weyn, taas oo aad kor u rogo karo iyo sida loo isticmaalo sida barkin ama buste dheeraad ah.
Ready in ay alaabahooda u safrayaan tareen ama ballan aad safar tareen agagaarka Italy? Hubi in aad soo booqato Save A tareenka website-ka caga tigidhada tareenka tayaasha socdaalka Yurub at qiimaha ugu fiican. Hel sahaminta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/how-to-pack-for-a-train-trip-across-italy/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / fr ama / iyo luuqado badan.
#pack talooyin tareenka traveltips